I-Todo eReaders yiwebhusayithi eyasekwa ngo-2012, xa abafundi be-ebook babengekaziwa kakuhle okanye beqhelekile kwaye kuyo yonke le minyaka iye yaba Isalathiso ngaphakathi kwihlabathi labafundi be-elektroniki. Iwebsite apho unokwaziswa ngeendaba zamva nje kwihlabathi lee-eReaders, ulwaziso lwamva nje lweemveliso ezibalulekileyo ezinje ngeAmazon Kindle kunye neKobo kunye nezinye ezaziwayo njengeBq, iLikbook, njl.
Siyawugqibezela umxholo kunye Uhlalutyo lwesixhobo sobuchule. Sivavanye ngokucokisekileyo i-eReaders iiveki ukuxelela amava okwenyani okufunda ngokuqhubekayo kunye nomnye wabo. Kukho izinto ezibaluleke njengokuzibamba kunye nokusebenziseka okuza kuchaza amava afanelekileyo okufunda ngesixhobo esingenakubalwa ukuba usibonile isixhobo kwaye usiphethe okwemizuzu embalwa.
Siyathemba kwikamva lokufunda kwidijithali kunye neeReader njengezixhobo kunye nenkxaso yayo. Sijonge zonke iindaba kunye neetekhnoloji ezintsha ezibandakanyiweyo kwizixhobo zentengiso.
Iqela labahleli beTodo eReaders lenziwe liqela le iingcali kwi-eReaders kunye nabafundi, izixhobo kunye nesoftware enxulumene nokufunda. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
NdinguMphathi weProjekthi e Iindaba zeBlogs , ndiyayithanda i-eReaders kunye nomkhuseli wokupapashwa kwedijithali, ngaphandle kokulibala eyesiko 😉 Ndine Kindle 4 kunye ne-BQ Cervantes 2 kwaye ndifuna ukuzama i-Sony PRST3
Injongo yam yangoku kukudibanisa ubuxoki kunye netekhnoloji ukusuka kumzuzu wokuphila kwam. Ngenxa yoko, ukusetyenziswa kunye nolwazi lwezixhobo ze-elektroniki ezinje nge-E-Reader, endivumela ukuba ndazi ezinye iindawo ezininzi ngaphandle kokushiya ikhaya. Ukufunda iincwadi ngesixhobo kulula kakhulu kwaye kukhululekile, ngenxa yoko akukho nto ndiyifunayo ngaphandle kwe-E-Reader esemgangathweni.
Umhleli kunye nohlalutyo lwe geek. Umthandi wezixhobo kunye netekhnoloji. "Ndicinga ukuba kunokwenzeka ukuba abantu abaqhelekileyo bakhethe ukungaqheleki" - Elon Musk.
I-Asturian, ezinekratshi ukusuka eGijon ngokuchanekileyo. Injineli yezobuGcisa ibathandana nabantu abafundayo ukusukela oko baphuma. Kindle, Kobo, ... Ndiyakuthanda ukwazi nokuzama iincwadi ze-e ezahlukeneyo, kuba zonke zahlukile kwaye zonke zinokunikezela okuninzi.
Oko ndafumana i-Kindle yePhepha leWhite ibiyinto yam yokuya kufunda ngaphambi kokuvumela olunye usuku luhambe. Iphantse yaba "yimpambano" yeeReaders ndiza kuzama ukuyidlulisela kwiTodo eReaders.